बिक्रीका लागि अद्वितीय घरहरू - विश्वव्यापी असामान्य घरहरू विशेष खोजहरू
विशेष खोज? के एक विशेष खोज परिभाषित गर्छ?
ओछ्यान र ब्रेकफास्ट वा AirBnBs
महल र चाटियस बिक्रीको लागि
पृथ्वी शेल्टर, बर्मेड वा भूमिगत घरहरू
घोडाको खेत र फार्महरू
केबिनहरू र देस्टिक घरहरू लग गर्नुहोस्
आत्मनिर्भर, Prepper र अफ-ग्रिड घरहरू
भूमि र क्षेत्र
बिक्रीको लागि असीमित घरहरू
भीडमा बाहिर खडा हुने गुणहरू
५३,००० भन्दा बढी अद्वितीय घर खरीददारहरु तपाइँको सम्पत्ति हेर्न चाहानुहुन्छ
यसलाई प्रसिद्ध बनाऔं!
$ ० / महिना
ब्रेन्डा! यो सुन्दर छ! तपाइँको काम र विवरण को लागी ध्यान को लागी धन्यवाद। महान लेआउट र ढाँचा। यो माथि र मैले सोचेको भन्दा बाहिर छ।
जेन एम (मालिक द्वारा बिक्री को लागी)
धन्यवाद! तपाइँको साइट साँच्चै सही अद्वितीय खरीदारहरु ल्याउँछ! कस्तो आशिष्!
बेथ पी (मालिक द्वारा बिक्री को लागी)
शुभ प्रभात ब्रेन्डा, हामीले हाम्रो घर बेचेका छौं! पूर्ण मूल्य नगद प्रस्ताव कुनै आकस्मिकता के-कहिल्यै! म धेरै खुसी छु, म तिमीलाई भन्न सुरु गर्न सक्दिन। तपाइँले गर्नुभएको सबैको म कदर गर्दछु। म पक्कै पनी तपाइँको सेवा र साइट को सिफारिश गर्दछु।
पेट्रीसिया ई। (मालिक द्वारा बिक्री को लागी)
प्रिय ब्रेन्डा, तपाइँ कर्तव्य को कल भन्दा माथि जानुभयो। तपाइँको व्यक्तिगत काम र स्पर्श संग धेरै प्रभावित ...
एलिजाबेथ एस (मालिक द्वारा बिक्री को लागी)
कस्तो शानदार विज्ञापन - वाह! धन्यवाद, ब्रेन्डा, तपाइँको जादूगरिको लागी!
वाल्टर (मालिक द्वारा बिक्री को लागी)
म तपाईको सबै मद्दत को लागी धन्यवाद भन्न चाहान्छु। सम्पत्तीको तपाईंको विवरणले घरमा धेरै सम्भावित खरीददारहरू ल्यायो। यति धेरै मानिसहरूले यो देखे र यो २० के मा बेच मा सोधिएको मूल्य मा बेचे! म अझै कलहरू प्राप्त गर्दै छु। मलाई लाग्छ तपाईंको वर्णनले माथिको सोध्ने प्रस्ताव प्राप्त गर्न मद्दत गर्‍यो।
प्याट (मालिक द्वारा बिक्री को लागी)
यो सुन्दर देखिन्छ। तपाईंले एक राम्रो काम गर्नुभयो। म धेरै प्रभावित छु। प्रयासको लागि म तपाईंलाई धेरै धन्यवाद दिन सक्दिन। म बढी खुशी हुन सकेन।
रिच (मालिक द्वारा बिक्रीको लागि)
म तपाईंलाई मद्दतको लागि पर्याप्त धन्यवाद गर्न सक्दिन। यदि यो तपाइँको लागि नभएको भए मलाई थाहा छैन म अहिलेसम्म प्रक्रियामा छु। तपाईंले मलाई सुरुमै यति धेरै प्रोत्साहन दिनुभयो, र हरेक चोटि मैले जवाफ दिंदा तपाईं जवाफ दिनुहुन्छ। त्यो मेरोलागि संसार हो।
मोनिक (मालिक द्वारा बिक्रीको लागि)
धन्यवाद!!! तपाईं मास्टर मार्केटर हुनुहुन्छ। प्रतिक्रिया तुरुन्त थियो! तपाईं मार्केटिंग ब्रेन्डा मा एक पाठ्यक्रम सिकाउन सक्छ! म पक्कै लाइन मा पहिलो हुनेछु।
पेटसी एन (केलर विलियम्स ब्रोकर)
ब्रेन्डा, तपाईंले सूचीको विवरणमा आश्चर्यजनक रूपमा गर्नुभयो। धन्यवाद - तपाईको लागि "विश्वास"र हाम्रो सम्पत्ति सूचीकरणको बारेमा उत्साह।
एन कुन् र परिवार (मालिक द्वारा बिक्रीको लागि)
वास्तवमा, तपाईं व्यावसायिकता, दक्षता, उत्साह, र हेरचाहको मामलामा एक चम्किलो तारा झैं बाहिर खडा हुनुहुन्छ। म यी कारणहरूको लागि तपाईं मार्फत घर बेच्न चाहन्छु। शुभकामना!
फ्रान जी (मालिक द्वारा बिक्री को लागी)
मलाई तपाईंले आफ्ना पृष्ठहरू सँगै राख्नु भएको तरिकाले मात्र मन पर्छ। तपाई साँच्चिकै पढ्नको लागि समय लिनुहुन्छ र भावना प्राप्त गर्न र उच्च पोइन्टहरू लिनुहुन्छ। त्यो यति दुर्लभ छ र तपाईंलाई अपवाद बनाउँछ! हामी तपाईलाई धन्यबाद दिन्छौं। धेरै धेरै धन्यबाद ~
विश्वास एल (केलर विलियम्स एजेन्ट)
तिमी एकदम राम्रो छौ! मेरो विक्रेतालाई तपाईंले प्रेम गर्नुभयो!
मेग एल (एडिना रियल्टी एजेन्ट)
तपाईंको ईमानदारी र कामका लागि धन्यबाद जुन तपाईंले मेरो फाईलमा खर्च गर्नुभयो।
केटा एल (मालिक द्वारा बिक्री को लागी)
फेरि तपाइँ अचम्मको काम गर्नुहुन्छ!
जुली डी (केलर विलियम्स)
म निश्चित रूपमा तपाइँको लिस्टिंगमा तपाइँको होशियारी ध्यान दिनुहोस् appreciate
एन्जेला बी (मालिक द्वारा बिक्री को लागी)
सधैं जस्तो सुन्दर देखिन्छ!
विश्वास एल। (केलर विलियम्स एजेन्ट)
यो त्यस्तो सजिलो प्रक्रिया थियो र म तपाईको सबै सहयोगको मूल्यांकन गर्छु!
डस्टिन बी (एजेन्ट)
वाह! म परिणामबाट प्रभावित छु। धेरै धेरै धन्यवाद!
हाम्रो घर शुक्रबार बन्द हुने कार्यक्रम छ! You तपाईले गर्नु भएको सबैको लागि धन्यवाद। यसले मलाई तपाईलाई "जान दिनुहोस्" भनेर सहयोग गर्यो। यो कडा थियो!
बेथानी एम (मालिक द्वारा बिक्रीको लागि)
मैले तपाईलाई कत्ति मेहनत गरी सकेको आशा गरेको छैन यो मेरो लागि खर्च भयो। धन्यवाद। तपाईं एक उत्तम कम्पनी हुनुहुन्छ।
साम (मालिक द्वारा बिक्रीको लागि)
नमस्ते, ब्रेन्डा, I तपाइँलाई थाहा दिन चाहानुहुन्छ कि हामीसँग छ हाम्रो घरमा प्रस्ताव स्वीकार गरियो! विश्वलाई सम्पत्ती मार्केटिंगमा तपाईंको कडा मेहनतको लागि धन्यबाद!
कार्ल (मालिक द्वारा बिक्री को लागी)
राम्रो ब्रेन्डा देखिन्छ र मेरो अपेक्षाहरू पार गर्नुभयो। खुशी छ म तपाईंको वेबसाइट भर आए!
म्याट (राम्रो घर रियल्टी एजेन्ट)
बिक्रीका लागि हाम्रो अद्वितीय घरहरू हेर्नुहोस्
दक्षिणी ब्ल्याक हिल्स लग होम
हट स्प्रिंग्स, साउथ डकोटा 57747
Full पूर्ण, २ आधास्नान
रोजबर्ग, ओरेगन 97471
अफ-ग्रिड माउन्टेनटप सम्पत्ति
९८६ चुम्ले माउन्टेन रोड
भर्मन्ट मा Hobbit हाउस!
43 उत्तर सेन्ट।
मिडलटाउन स्प्रिंग्स, भर्मन्ट 05757
सानो लग केबिन
१30२ पार्क लेन
युलान, न्यूयोर्क 12792
चर्च हाउस रूपान्तरण
113 चर्च St
डाल्टन, पेन्सिलभेनिया 18414
204 एन जेफरसन
लोगान, कन्सास 6
ठूलो Acreage वाटरफ्रन्ट एस्टेट
डाउनटाउन एटलान्टा मा युनिकोर्न हाउस
1646 Eastport टेरेस
एटलान्टा, जर्जिया 30317
ल्यान्डमार्क ऐतिहासिक सम्पदा
5595 US राजमार्ग 278
घर रूपान्तरण गर्न चर्च
9251 मुख्य सेन्ट
वेस्टर्नभिल, न्यूयोर्क १13486
१ पूर्ण, १ आधास्नान
हिलटप वाटरभ्यू टेक्सास एस्टेट
1643 प्रोमोन्टरी डा
देवदार हिल, टेक्सास 75104
बिक्रीका लागि हाम्रो सबै अद्वितीय घरहरू हेर्नुहोस्
तपाईंको अनौठो घर बेच्ने?
मेरो सम्पत्तीको विज्ञापन गर्नुहोस् - $ १ / / महिना
मेरो लागि एक अनुकूल अभियान बनाउनुहोस्
अब तपाईं हाम्रो साइटमा प्रति महिना .40.00 १.XNUMX,००० को लागि तपाईंको अनुपम सम्पत्ति पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ!
अथवा, हामी तपाईंको लागि अनुकूलन मार्केटिङ कार्यक्रम बनाउन सक्छौं!
विशेष खोजीहरूले गुणलाई अद्वितीय शैली द्वारा वर्गीकृत गर्दछ। यदि तपाईं आफ्नो असामान्य सम्पत्ती बेच्न चाहानुहुन्छ भने यो सूचीबद्ध र यहाँ पूर्ण मार्केटिंग हुनेछ - वा - यदि तपाईं खरीद गर्न चाहानुहुन्छ भने सम्पत्तीको शैलीमा क्लिक गर्नुहोस् जुन तपाईंलाई रूचि छ।
विशेष "फेला पार्छ ..." - सम्पत्ती कोटी द्वारा बिक्रीको लागि हाम्रो अनुपम घरहरू खोज्नुहोस्
के तपाईंसँग एक अनौंठो घर छ जुन तपाईं हाम्रो साइटमा हेर्न चाहनुहुन्छ?
हामी तपाईंको लागि रेड कार्पेट रोल आउट गर्नेछौं!
मैले विशेष "खोज्छ ..." सुरु गरें?
विशेष "फेन्ड्स ..." को विचार मेरो व्यक्तिगत अनुभवबाट एक क्रेताको रूपमा विकसित भयो, र त्यसपछि विक्रेताको रूपमा - म एक हुनु भन्दा धेरै अघि अचल सम्पत्ति एजेन्सी.
तपाईं जस्तै, म बिक्री को लागी धेरै अनौंठो घरहरु को स्वामित्व छ। एक खरीददारको रूपमा, म परम्परागत घर जग्गा फर्महरूसँग काम गर्न निराश थिएँ जसले मलाई अद्वितीय सम्पत्ति खोजिरहेको थियो भनेर बुझ्न सक्दैनन्, त्यसैले उनीहरूले लगातार मलाई स्थानीय र एमएलएसको साँघुरो सीमाहरूमा फिट हुने मानक र सांसारिक सम्पत्ति देखाए।
जब म मेरो अनौंठो घरहरू बेच्न तयार थिएँ, तब मैले पत्ता लगाए कि परम्परागत फर्महरूले अनौंठो सम्पत्तिहरू बजारमा जानको लागि ज्ञान, सीप, र अनुभवको अभाव रहेको छ, त्यसैले मैले मार्क मार्केटिंगको निपुणता बटुलेको न्यु योर्क स्टक एक्सचेन्जको निर्देशक मार्केटिंगको रूपमा प्राप्त गरे। यो एक रियल इस्टेट इजाजतपत्रको साथ अचल सम्पत्ति उद्योगमा अत्यावश्यक खाई भर्न, र भोइलाको साथ! विशेष "फेला पार्छ ..." जन्म भएको थियो!
हामी बजार र बिक्री को लागी असामान्य सम्पत्ती र अद्वितीय घरहरु लाई बढावा दिन्छौं।
हामी तपाईंलाई सहयोग गरौं। हामी असामान्य घरहरूको लागि विज्ञापन एजेन्सी हो। हामी यथार्थ घरहरू बेच्नको लागि समर्पित पनि छौं।
बायोफिलिक डिजाइन - यसलाई तपाईंको घरमा थप्दै
शिपिंग कन्टेनर घरहरू